1328 पटक पढिएको
‘मानिसको वास्तविक पहिचान उसको कर्म र संस्कार हो । गुण र दोष नामले नभइ चरित्र र आचरणले निर्धारण गर्ने हो । नाम राम्रो हुँदैमा मानिस राम्रो हुने उही“ मिथकमा हुने हो, वास्तविक जीवनमा होइन ।’
संसारमै नामका लागि धेरै युद्ध भएका छन्, अपराध भएका छन्, तेरो मेरो नामले बिभाजन तथा बिछोड पारेको छ । सबैलाई नामको माया छ , नाम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, आसय छ ।
महान साहित्यकार विलिएम सेक्सपिएरले ‘नाममा त्यस्तो के राख्या छ’ भनेर सोह्रौ शताब्दीताका भनेका थिए । वास्तवमा हो पनि † नाम अनुसारको ठाउ“ , मानिसको चरित्र सायदै मिल्ला पनि †
सामान्यतया, नाम कुनै व्यक्ति, स्थान चिनाउने वा बोलाउने माध्यममात्र हो । तर नेपाली समाजमा नामकरणको छुट्टै स्थान रहेको छ । नामको ठुलो महत्व छ पनि † बालक जन्मिए पश्चात् न्वारानमा नाम राख्ने चलन छ । नाम राख्दा ज्योतिषको परामर्श अनिवार्य जस्तै रहेको छ । नामका पछाडि राशि , ग्रहको ठूलो भुमिका रहेको विश्वास गरिन्छ । कयौंले आफ्नो नामको अक्षर फेरबदल गरेको देखिन्छ । नाम अनुसारको राशिका विभिन्न रत्न, पथ्थरका औठी लगाउनेको जमात दिनानुदिन बढ्दो छ । मानिसलाई के विश्वास छ भने राशी रत्नका औठीं हातभरि लगाउनाले शुभ हुने, फलिफाप हुने, ग्रह सन्तुलन हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ । त्यस्तै कुनै नया“ बस्तीको नाम राख्दा होस् या कम्पनीको नाम जुराउ“दा धेरै सोचविचार गरेको देखिन्छ । नामको अक्षरमा तालमेल मिलाउने धेरै छन्, स, श वा अङ्ग्रेजी भभ, m ,यय जस्तो वर्णको हेरफेर गर्न परिपाटी रहेको छ । भारतीय तथा नेपाली नायक नायिकाले ज्योतिषलाई देखाए नाम परिवर्तन गरेका छन् । अझ आधुनिक विश्व परिवेशमा नामको छुट्टै महत्व छ । नाम सरल, सहज, भिन्न अनि अर्थपूर्ण राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता बढ्दो छ । नव शिसुको नाम राख्दा बुबा र आमाको पहिलो अक्षर वा अन्तिम अक्षर मिलाएर राखेको पनि भेटिन्छ ।म स्कुल पढ्दाताका मेरो नाम अलि लोक शैलीको लाग्थ्यो । मिम बहादुर ,धेरै मानिसहरू झुकिन्थे , कस्तो नाम राखेको भन्थे , प्राय मीन बहादुर या भिम बहादुर हो कि अनुमान लगाउँथे । मलाई पनि बेलाबेलामा कस्ले यस्तो नाम राखेको होला जस्तो लाग्थ्यो । बुबालाई सोध्दा जिमुवाल बाजेले राखेका हुन भन्नुभयो । हिजोआज सहर बजारमा नामको पछाडि बहादुर लोपोन्मुखको अवस्थामा छ । कक्षामा मै मात्र बहादुर थिए । मेरा साथीहरूका नाम आधुनिक, चलनचल्तीका हुन्थे, समीर, सुरज, सोनिया, रिया, सिया, राकेश, अरुण, राहुल इत्यादि । ती नामहरु फिल्मका हिरो हिरोइनसंग मिल्थे पनि । मेरो भने पुरानो शैलीको † अध्ययनको स्तर बढेसंगै मेरो साथीहरूका नाम पश्चिमी शैलीका बढ्ता भेटिए । दस जोड दुई ताका कृजा, साया, रिकि बिकि थिए भने स्नातकोत्तर पढ्दा अङ्ग्रेजी कट नाम भएका साथीको बाहुल्यता देखियो, डिबि, सिबि, डेभिड इत्यादि ।
नाम र त्यसको अर्थले धेरै महत्व राखेको हुन्छ । अहिलेका मानिस नामको अर्थ खोज्न माहिर छन् । पहिलो भेटमा तपाईंको परिचय, त्यो भन्नुको माने नाम के हो ? नाम सुनिसकेपछि प्रतिक्रिया सुनिन्छ । कस्तो नाम, कसैले तारिफ गर्छन् त कसैले प्रश्न ? पहिलो प्रतिक्रिया प्रश्चात दोस्रो प्रश्न नामको अर्थ के हो भन्न हिच्किचाउदैनन् । कक्षा कोठामा शिक्षक शिक्षिकाले प्राय सोध्छन् पनि † मलाई धेरैले सोध्थे, मिमको अर्थ तर मसँग उत्तर हुदैन थियो । एकदिन नेपाली गुरुलाई गुरु यो मिमको अर्थ के हुन्छ ? सोधे । बाबू यसको अर्थ संस्कृतमा सुन्दर हुन्छ भन्नु । अब कसैले सोधे उत्तर थियो मसँग । पछि आफैले पनि स्वअध्ययन गरे । खोज्दै जा“दा मिम शब्द पवित्र कुरानको सुरुको शब्द रहेछ । अंग्रेजीमा पनि मिम माने राम्रो रहेछ ।
नेपाली समाजमा विशेषगरी कर्नाली भेगमा दलित समुदायले आफुले चाहे जस्तो नाम राख्न पाउदैनन्, यदि गैरदलित, विशेषगरी ठाकुरी, विष्ट समुदायका मानिसको नामसँग मेल खाएमा ती समुदायका मानिसले तत्काल नाम परिवर्तन गर्न दबाब दिने गरेको पाइन्छ । दलित र गैरदलितको नाम समान्तर नहोस् भन्ने गैरदलितको आसय बुझिन्छ । यदि उनीहरूले भनेको मानेन भने कुटपिट, गालीगलोज सहनुपर्छ । विकट भेगमा दलितहरूले राम्रो नाम राख्न पाउदैनन् । उनीहरूका निम्ति पहिले नै नाम तयार राखिन्छ, आइते, गोते, घुनखोरे, बाचा, रोइमली, पुछ्या इत्यादि ।
नेपाली राजनीतिको वर्तमान अवस्था नाममै अट्किएको छ । भलै राज्य संघीय गणराज्यमा गैसकेको छ तथापि नामको किचलो कायमै छ । प्रदेश ६ ले कणार्ली प्रदेश नाम पायो, चारले गण्डकी प्रदेश पायो र सातले सुदूरपश्चिम नाम पाएपनि दोमत छदैछ । यी बाहेक अन्य प्रदेशमा हालसम्म के नाम राख्नेमा बाझाबाझ, विरोध तथा चलखेल सुरु भएको छ । यो नाम राख्ने त्यो राख्नेमा मत बाडिएको छ । अर्को तथ्य के छ भने नेपाली राजनीतिक दलहरुमा जति नामको किचलो अन्यत्र काहाँ होला र † पार्टीको नाममा मोटो श र पातलो स राख्ने बिषयमा सिङ्गो पार्टी फुटेको छ । निर्वाचन आयोग अझ बढ्ता जानकार होला दलगत नामको किचलो बारेमा, ड्यास राख्ने, एकै डिकोमा नाम राख्ने, पार्टीको नामको अगाडि लोकतान्त्रीक, प्रजातान्त्रिक, समाजवादी राख्ने जस्ता थुप्रै घटना छन् । नामको कारणले गर्दा अदालतमा रिट हालेका घटना धेरै छन् ।
पुर्वी तराईमा चल्ने गाडीका नाम रोचक हुने गरेका छन् । हिन्दी सुपर हिट चलचित्रका नाम भएका गाडी जस्तै धुम, दबंग, बडी गार्ड, रेडि, बहुबलीजस्ता नामका गाडी सडकमा कुदेको हेर्न सकिन्छ । यो परिपाटी भने अलि नया“ रहेको छ । अन्य ठाउ“मा भने त्यस ठाउँको प्रशिद्वता झल्कने नाम राखेको पाइन्छ । पश्चिमतिर चल्ने गाडिका नाम बर्दिया टाइगर, कर्णाली रिभर साइड, अपि हिमाल इत्यादी । त्यस्तै आजको पुजीवादी समाजमा नाम अनुसारको मूल्य निर्धारण हुन्छ । ब्मष्मबक, ल्ष्पभ, एगmब तथा अन्य चल्तीका ब्रान्डका उत्पादन नामले बिकेका हुन्छन् । उक्त ब्रान्ड नाम भएका सामानलाई उच्च कोटिको दर्जा दिइन्छ । त्यस्तै खानामा केएफसी, म्याकडनेल , पिय पदार्थमा कोक, ¥यान्टा लगायत बस्तु नामको कारणले चलेका छन् । मानिसको पहिलो रोजाइमा यी बस्तुहरु पर्छन् । मुख्य कारण भनेको उहीँ नाम हो ।
नाम र बदनाम आधुनिक समाजको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको छ । मानिस नाम र बदनामका कारणले चर्चामा रहन्छ । नाम चल्ने काम गरे ताली पाउँछ भने बदनामीमा गाली । त्यसैले गाली पाउनेभन्दा ताली पाउने काम ग¥यौ । वास्तवमा नाममा के नै राखेको छ र † मानौ सलमान, साहरुक नाम राख्दैमा नायक र वसामा बेनलादेन राख्दैमा खलनायक हुने हैन पनि । नत्र गल्ली गल्लीमा विल गेट्सहरु ठोकिन्थे होला । मानिसको वास्तविक पहिचान उसको कर्म र संस्कार हो । गुण र दोष नामले नभइ चरित्र र आचरणले निर्धारण गर्ने हो । नाम राम्रो हुँदैमा मानिस राम्रो हुने उहीँ मिथकमा हुने हो, वास्तविक जीवनमा होइन ।
प्रकाशित मिति २०७६ फागुन २७